Kpọtụrụ - ESTAmerica US ESTA E-Filing Traveling Services
Oge awa ọrụ bụMonday - Friday,
Kedu ụgwọ ọ bụ maka ngwa ESTA?
Kedu usoro ịkwụ ụgwọ a nabatara?
ESTA bụ usoro ntanetị, na ịntanetị dị mkpa. N'ihi ya, a nabatara kaadị akwụmụgwọ niile na kaadị akwụmụgwọ.
Ị ga-enweta ịnweta ike njem ESTA ma ọ bụ na-akwadoghị n'ime awa ole na ole. Otú ọ dị, nyochaghachi, na nhazi ngwa nwere ike iwe ogologo. N'okwu a, ị nwere ike ịtụ anya na ị ga-ezigara gị ikike ị ga-ezigara gị n'ime ma ọ dịkarịa ala 72 awa.
Kedu ka ihe ọmụma m si echekwa? Echebere data m?
Ejiri 4 na-echebe ESTAmerica.org na nchekwa. Anyị Bochum, DNS, na CDN niile na-ejide Secure SSL na nke ọ bụla, na Mcafee na ESTAmerica.org na-echebe ya. Ihe nkwụnye ụgwọ na kaadị akwụmụgwọ nwere nchekwa ọzọ na ngalaba nhazi.
Anyị na ESTAmerica.org anaghị ejide ma ọ bụ chekwaa ozi kaadị akwụmụgwọ gị. Anyị na ESTAmerica.org na-eji kuki na koodu nchikota nke kuki maka ahia na iji nwekwuo ahụmahụ onye ọrụ gị na weebụsaịtị.
Enwere m akwụkwọ ọnụahịa maka iwu m?
Ee ị na-eme. Ị ga-enwetakwa ihu ọma gị ma ọ bụ enweghị ozi e-mail gị na 72 awa.
Esi akpọ ESTAmerica.org?
Biko zigara anyị email na ajụjụ gị.
Nọmba ekwentị anyị + 1-307-785-0777